Marketing amin'ny teknolojia
Talata, Janoary 11, 2011 Sabotsy, Oktobra 18, 2014 Douglas Karr
Ny varotra teknolojia, mifanohitra amin'ny teknolojia ara-barotra, no fomba ananganana ny vokatra sy ny serivisy amin'ny teknolojia ho an'ny mpanjifa mety. Koa satria mihetsika an-tserasera ny tontolontsika sy ny fiainantsika… ny fomba mahaliana ny teknolojia, mitarika ohatra amin'ny fanaovana marika sy tsena amin'ny ankapobeny.
Sarotra ny tsy mieritreritra marketing teknolojia raha tsy miresaka amin'i Apple. Mpivarotra mahafinaritra izy ireo ary manao asa tsara kokoa amin'ny fametrahana ny tenany amin'ny tsena feno olona miaraka amin'ny fifaninanana amina taonina… ary mbola mahazo tombony sy tombom-barotra hatrany izy ireo. Ny Core amin'ny marketing an'i Apple dia tsy miresaka momba ny vidiny sy ny endrika… fa mifantoka amin'ny mpihaino kosa.
Rehefa mahita ny fampielezana dokambarotra Apple aho dia mino aho fa tapaka ho hevitra vitsivitsy ny tsirairay:
fahadiovana - matetika tokoa, ny fampielezan-kevitra tsirairay dia misy hafatra sy mpihaino iray kendrena… tsy misy intsony. Tsotra ny sary, toy ny hafatra ihany koa. Matetika ho an'i Apple ny manana fiaviana fotsy na mainty… mba hahafahanao mampifantoka ny sainao amin'ny toerana tian'izy ireo.
tombontsoa - Apple dia marika premium izay manome vokatra samy kanto sy tsara tarehy. Manamboatra anao izy ireo te ho anisan'ny antokom-pivavahana. Miresaka amin'ireo mpampiasa Apple ary hizara ny andro nifindrany izy ireo ary tsy hijery any aoriana intsony.
mety - Apple koa dia manao asa lehibe amin'ny fidirana amin'ny psyche kendren'ny mpihaino azy. Rehefa mahita fampielezan-kevitra Apple ianao dia manomboka mieritreritra an'izay azonao noforonina tamin'ny vokariny.
Ity misy dokam-barotra vao haingana momba ny Fiainana aho (izay novidiko vao tsy ela):
Doka mahery io… fa tsy mifantoka amin'ny olana, ny fametrahana toerana (izay nataon'i Apple tamin'ny doka Mac sy PC), na ny endri-javatra, mifantoka amin'ny mpijery i Apple. Iza no tsy te-hamorona horonantsary amin'ny sarimihetsika an-trano ary hamadika azy ireo ho clip Hollywood-style?
Indraindray ny orinasa miditra amin'ity dia amin'ny alàlan'ny fampiasana fijoroana vavolombelona ataon'ny mpanjifa… fa toa ialao izany aza i Apple. Mamboly voa fotsiny izy ireo… ary mamela ny eritreritry ny mpihaino hanao ny ambiny. Inona no fihetseham-po mety ho azon'ny orinasanao, ny vokatrao na ny serivisinao? Ahoana no ahafahanao mametraka ny varotrao tsara kokoa amin'ny fihetseham-po?
Tags: marketing amin'ny paomapaoma marketing formendrika marketingmetytombontsoafahadiovana
Jan 12, 2011 ao amin'ny 12: 46 AM
Hitako io olana io tsy amin'ny teknolojia ihany fa amin'ny ankamaroan'ny orinasa. Marketing marobe ankehitriny ataon'ny tompona orinasa no heverina ho harato manjono miaraka amin'ireo orinasa mandefa hafatra malalaka manantena fa hahatratra ny tsena mety. Ohatra, miara-miasa amin'ny tranokalan'ny mpianatra aho izao, izay zary tsena fotsiny ho an'ny mpianatry ny oniversite rehetra, saingy rehefa nanao fikarohana an-tsena izahay dia nahita 80% ny mponina no zandry vao nifindra trano hafa noho ny tsy fahampian'ny serivisy sy ny mpanjifa. vidiny ambony fanafanana. Afaka namolavola indray ny hafatra momba ny varotra sy ny mediana izahay hikendrena an'io tsena io. Nahita an'io betsaka io koa aho tamin'ny indostria hafa. Bilaogy mahafinaritra.
Jan 13, 2011 ao amin'ny 5: 13 AM
Doug - mety ho noroahinao aho tamin'ny farany hanoratanao lahatsoratra bilaogy tiako ho soratana.